समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारबाट नहट्ने, सरकारको भने आलोचना - Everest Dainik - News from Nepal
समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारबाट नहट्ने, सरकारको भने आलोचना
२०७६, २८ कार्तिक बिहीबार
काठमाडौं । सत्तागठबन्धनको एक घटक समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकारबाट नहट्ने निर्णय गरेपनि आफू नै सहभागी सरकारको आलोचना गरेको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा बसेको ‘संघीय परिषद् बैठक’मा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफैं सहभागी सरकारको आलोचना गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा सरकार जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न असफल भएकोमात्र नभइ अकर्मन्यता, भ्रष्टाचार र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गएको उल्लेख छ ।
याे पनि पढ्नुस बाबुराम भन्छन्: क्रान्तिपछि देशको नेतृत्व ओलीको हातमा पुग्नु विडम्वनापूर्ण !
प्रतिवेदनमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकार एकपछि अर्को गरी संघीयता असफल बनाउन लागिपरेको आरोप लगाइएको छ ।
सरकारको आलोचना गरेपनि सोही प्रतिवेदनमा तत्काल सरकारबाट बर्हिगमनको विषयमा भने मध्यमार्गी बाटो लिइएको छ ।
सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र लामो बहस चलेपनि अध्यक्ष डा. भट्टराईले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाए सरकारबाट बर्हिगमनका लागि कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई अस्पताल भर्ना
सरकारबाट बर्हिगमन हुनुपर्ने पक्षमा रहेका अध्यक्ष डा. भट्टराईले नै मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेपछि समाजवादी पार्टीको सरकारबाट बर्हिगमन तत्काललाई टरेको छ ।
प्रतिवेदनमाथि बैठकबाट प्राप्त सुझाव समेटेर केन्द्रीय समिति बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्नेछ ।
बैठकमा देशभरिबाट करिब एक हजार संघीय परिषद् सदस्य सहभागी थिए ।
याे पनि पढ्नुस ‘संविधान संशोधन सर्वसम्मतिबाट गर्नुपर्छ, रेशम चौधरी रिहा हुनुपर्छ’
संघीय परिषद्को बैठकलगत्तै शुक्रबार र शनिबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
गएको वैशाख २३ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच भएको एकता भएपछि पहिलोपटक संघीय परिषद् बैठक बसेको हो ।
ट्याग्स: डा. बाबुराम भट्टराई, समाजवादी पार्टी